Waa maxay kaarboon moono oksaydh (monoxide)?
Kaarboon moono oksaydh (monoxide) waa hawada dadku banaanka u neefsadaan, sida badanna waxaa loo yaqaan CO, waana gaas (hawo) sun ah. Kaarboon moono oksaydh (monoxide) ma aha mid la arki karo, la urin karo ama la dhadhansan karo. Sunteedu waxay waxyeello yeelan kartaa inta badan, marka iyadoo tiro badan ay gurigaaga ku jirto, ama in yar oo iyada ah ay maalmo badan ku jirto hawada gurigaaga. Sidaasoo kale gaaska kaarboonku wuxuu ka dhalan karaa marka la isticmaalo: basiinka, olyada baabuurta, gaaska faynuusta, qoryaha la shito, dhuxusha dhirta iyo tan dhulka laga soo qodoba.
Kaarboon moono oksaydh (monoxide) haddaannu ku sumownno maxay jirkayaga u dhimi kartaa?
Haddii aad ku sumowdo kaarboon moono oksaydh (monoxide), waxay keeni kartaa: madax xanuun, jahwareer, daal, ama xanuun caloosha kaa qabta. Haddii adiga iyo reerkaagu aad dareentaan xanuunada aan soo xusnay oo kale, kadibna aad caafimaad dareentaan marka aad guriga dibedda uga baxdaan, hadana xanuunnada kor ku xusani ay idinku soo noqdaan markaad guriga dib ugu soo laabataan, waxay u badantahay in uu ku hayo xanuun ka yimid sun ka dhalatay kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ka gurigaaga (ku jirta).
Kaarboon moono oksaydh (monoxide) waa ku dili kartaa.
Sideebaan kaarboon moono oksaydh (monoxide) uga ilaalin karaa gurigayga?
Kaarboon moono oksaydh (monoxide) waxay guriga soo geli kartaa marka aad shidato(gubto) shidaallada guryaha lagu diiriyo(xilliga qaboobaha), ama biyaha lagu kululaysto, ama marka wax la karinayo (cuntada). Waxaa jirta in loogu talagalay in uu kaarboonkaas dibadda u saaro qalab ku xiran qalabka wax lagu kululaysto ee guryaha ku rakiban, waxaa maraka qaarkood dhici karta inaysan shaqaynayn tuubada (marinka) qaaca saara ee saqafyada guryaha ka taagan, kadibna gaasaskii gubanayey (qiiqoodii) ay gurigaaga dib uugu soo noqdan. Sidoo kale kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ka ay siidayso baabuurta iskaabamiintadoodu, waxaa dhici karta in ay gurigaaga uga soo gudubto garashka, hadduu guriga ku dheggan yahay.
Hawada qolku waxay ku darmataa gaasaska ka dhasha shidaalada guriga dhexdiisa laga isticmaalo, kadibna waxay raacaan qiiq saartada. Waa in hawadoo dhami ay kor u raacdo qiiq saartada, ee maha in ay hoos u raacdo. Marka biyo kulayliyaha gurigaaga ama haanta olyada la shito ololisa ay wax diirinayaan, waa in uu kulayl noqdaa ka isku xira dhuumaha hawada qaada.
Yaa halis ku jira oo looga baqayaa in uu ku sumoobo kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ka?
Qof kasta oo kaarboon moono oksaydh (monoxide) jiidaha halis ayuu u yahay inuu sumoobo, gaar ahaan marka in badani hawada ku jirto. Qof Kasta! Laakiin waxay kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ku si gaar ah halis ugu tahay haweenka uurka leh, carruurta ay sidaan, caruurta yar yar, waayeelka, iyo kuwa qaba dhiig yari, cudurada wadnaha ama sambabada.
Sidee baan ku ogaan karaa haddii kaarboon moono oksaydh (monoxide) badan ay gurigayga ku jirto?
Kuwa xirfadda u leh arimaha caafimaadka la xiriira iyo kuwa khibradda u leh (dayactirka) qalabka wax lagu kululeeyo, waxay ku taliyaan in u yeerato qof tababar u leh sida loo fiiriyo qalabka wax lagu kululeeyo, (haddii kale) adigu waad ku rakiban kartaa gurigaaga qalabka loogu talagalay inuu kuu digo (detector) marka gurigaaga kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ku ku badan yahay. Qalabkaa waxaad ku rakibi karta qolka jiifka agtiisa, si uu reerka oo dhan ugu digo marka kaarboonku ku bato guriga. Qalabkaas qiimihiisu waa kala duwan yahay, wuxuuse u dhexeeyaa $30 ilaa $50. Waxaad qalabkaa ka soo iibsan kartaa dukaamadda lagu iibsho qalabka loo isticmaalo guryaha ama kuwa gada alaabada qiimahooda la dhimay.
Maxaan sameeyaa haddii kaarboon moono oksaydh (monoxide) ku badato gurigayga?
Ugu horayn ka saar reerkaaga guriga, ka dibna wac gargaarka degdeg ah 911. Inaad arinkan (taladan) yeesho waa lama huraan haddii qof reerkaaga ka mid ahi uu xanuunsado kaarboonkaa darteed. Qofka (gargaarka degdeg ah ) taleefanka ka jawaabaya wuxuu ku waydiin doonaa su’aalo, si uu u go’aansado inaad u baahan tahay gargaar degdeg ah iyo in kale (sida:amblaas & dab demis). Haddiise aan gargaar degdeg ah loo baahnayn (samee sidatan hoos ku cad):
3) La xiriir kan gurigaaga shidaalka ku shuba ama qof loo tababaray dayac-tirka qalabka kululaynta guryaha ama qiiq saaridda (xilliga qabowga)
Haddii gurigayga ay ka jirto dhibaato kaarboon moono oksaydh (monoxide), sidee wax uga qaban karaa?
Hoygaad degan tahay hadduu yahay kiro, la xiriir qofka iska leh ama maamula dhismahaada aad ijaarka ka dhiibtid. Haddiise aad leedahay guri, la xiriir kan shidaalka u keena ama mid xirfad u leh sida loo dayac-tiro qalabka kululaynta guryaha. Iyaga ayaa tijaabin doona qalabkaaga, ka dibna (isku dayi doona ) inay helaan meesha ay ka imaanayso kaarboon moono oksaydh (monoxide)-ku, ka dibna way hagaajin doonaan ama waxay kuu sheegi doonaan cidda wax ka qaban karta.
Sidee baan reerkayga & naftaydaba uga badbaadin karaa sunta kaarboonka?
Hubi inay dhammaan si fiican u shaqaynayaan, qalabka guryaha kululeeya, kan qiiqa saara iyo dhuumaha qiiqu ama hawaduba sii marto.
Ha u isticmaalin makiinada cunada in aad guriga ku kululaysid. Waayo ololiyaasha makiinada cunada waxay ku sii daayaan guriga kaarboon moono oksaydh (monoxide) badan.
Xaggee baan ka heli karaa war inta ka badan?
Wixii macluumaad dheeraad ah xagga Karbon Monoksaydh (afka Ingiriisiga) ku sumoobidiisa, wac Waaxda Caafimaadka ee Minnesotta. Inta ku eg Twin Cities wac lambarka (651) 201-4601, wixii ka baxsan Twin Cities wac (800) 798-9050, ama wac guddiga caafimaadka ee magaaladaada ama degmadaada ama xafiiska fidinta degmadaada.
Wixii macluumaad dheeraad ah (afka Ingiriisiga), fiiri: Carbon Monoxide (CO) Poisoning in Your Home (Waaxda Caafimaadka ee Minnesotta)
Editor: Karen Burke, Educational Development System, Minnesota Extension.